Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo dhawaaqa whooshing of tareen barbaro galeen saldhiga a, iyo suurto gal ah lagaa on iyo kuwii tegayay meel gebi ahaanba aan la filayn. Ma xasuusan kartaa wax ka khayr badan Wadooyinka oo caan ku Historical tareenka? Tareenadu waa waanada of Age Golden ee safarka. Marka dadka…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Ma qorsheyneysaa ciidaha xagaaga soo socda iyo fikirka safarka? Haddii aad Boogaadin habka kharash ah oo wax ku ool u ah safarka soo socda tareenka, safarka on tareenka badbaadin kartaa lacagtaada si fudud. Intaa waxaa dheer, haddii aad u tagto tareen kursiga jaale hore,…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Taas oo meel ka wanaagsan in ay ku raaxaystaan ​​pizza badan dalka in ay soo hindiseen, xaq u? jacaylka Talyaaniga, jeclahay, jecel this hadhuudhka fudud-jeestay delicious! No dheriwadaag yaab in Italy waxaa qaab saafi ah oo farshaxanka jeestay, oo waxaa ugu dambeyntii UNESCO-ansixiyey! Barqiyey agagaarka Italy, waxaad ka heli doontaa pizzerias laga furay…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Qofna ma run ahaantii waa ogyahay sheekada dhabta ah ee shiilan Faransiiska ee France. Waxaan xitaa ma noqon kartaa hubiyo in haddii ay ka yimaadaan France, at dhan. Sug, waa maxay?! Yeap, waxaad xaq u leedahay inaan taas maqlay – Belgiumka iyo Faransiis labadaba ayaa sheegtay in cuntada this, oo labaduba sheekooyin ayey ku leeyihiin…